जेभियर Reverte: किताबहरु संसार यात्रा गर्न, बाँच्न को लागी काम गर्दछ वर्तमान साहित्य
Javier Reverte: किताबहरु
जब "जेभियर Reverte किताबहरु" को बारे मा वेब मा सोधपुछ, मुख्य परिणामहरु लाई पुनः निर्देशित अफ्रिका त्रयी। यो गाथा स्पेनी को सबैभन्दा मान्यता प्राप्त कामहरु मध्ये एक हो; यसमा उसले हामीलाई यो रहस्यमय महाद्वीप को आफ्नो दर्शन देखाउँछ। Reverte एक भावुक र जिज्ञासु यात्री जो जान्दथे कि कसरी उनको सही कलम संग कब्जा गर्न को लागी दुनिया भर मा उनको ब्लगहरु को धेरै।
जब उनी प्रतिष्ठित स्थानहरु को माध्यम बाट यात्रा गरे, उनले परिदृश्य र उनीहरु लाई चिनेका मानिसहरुको सही वर्णन लेखे। यी नोटहरुमा उहाँले आफ्नो भावनाहरु र धारणाहरु को प्रत्येक प्रतिबिम्बित गर्नुभयो, जुन उनले पछि ऐतिहासिक डाटा संग पूरक। उनको धनी कथाले उनलाई सयौं हजारौं पाठकहरु प्राप्त गर्न को लागी अनुमति दियो जो उनीहरुका किताबहरु मा यात्रा गर्न को लागी हरेक पटक यात्रा गर्न सक्षम भएको कदर गर्दछन्।.
1 जेभियर Reverte द्वारा सर्वश्रेष्ठ पुस्तकहरु
1.1 अफ्रीकी सपना (१ 1996)
1.2 Ulysses को हृदय (1999)
1.3 उजाडको नदी। अमेजन को माध्यम बाट एक यात्रा (2004)
1.4 नायकहरुको समय (२०१३)
2.4 Javier Reverte द्वारा काम गर्दछ
2.4.1 यात्रा किताबहरु
जेभियर Reverte द्वारा सर्वश्रेष्ठ पुस्तकहरु
अफ्रीका को सपना (1996)
यो एक यात्रा किताब हो जहाँ लेखक पूर्वी अफ्रिका को माध्यम बाट आफ्नो यात्रा को वर्णन गर्दछ र गाथा शुरू हुन्छ अफ्रिका त्रयी. सर्कल आकार को यात्रा कार्यक्रम कम्पाला (युगान्डा) मा शुरू हुन्छ, दार एस सलाम (तान्जानिया) मा जारी छ र केन्या मा समाप्त हुन्छ। काम क्षेत्र को इतिहास, युरोपियनहरु द्वारा यसको उपनिवेश र अफ्रिकी राजतन्त्रहरु को पतन को धेरै देखाउँछ।
जेभियर Reverte द्वारा उद्धरण
Reverte विस्तार मा एक दुखद र खुसी दुबै बारीहरु संग जीवन को एक जादुई क्षेत्र को माध्यम बाट आफ्नो यात्रा को वर्णन गर्दछ। साथै, लेखक मित्रता को बन्धन उजागर कि उहाँले बिभिन्न देशीहरु संग उनीहरु संग साझेदारी गरीयो। हेमिंग्वे, Haggard र चावल Burroughs: यसबाहेक, लाइनहरु को बीच यो केहि महत्वपूर्ण लेखकहरु जो भ्रमण र महाद्वीप को बारे मा लेखेका छन्, लाई जनाउँछ।
अफ्रिकाको सपना ...
Ulysses मुटु (1999)
यस अवसर मा, स्पेनीहरु पूर्वी भूमध्य र को माध्यम बाट यात्रा ग्रीस, टर्की र इजिप्ट: तीन देशहरु को लागी उनको यात्रा को वर्णन गर्दछ। Reverte तपाइँ धेरै संस्कृति, परम्परा र साहित्य भर मा आएर कारण विभिन्न भावनाहरु लाई हेर्न दिन्छ। यसको विकास को दौरान, यी तीन राष्ट्रहरु को केहि स्थानहरु विस्तृत छन्, र कथा ग्रीक पौराणिक कथाहरु र अन्य प्रासंगिक ऐतिहासिक घटनाहरु को बारे मा दन्त्यकथा संग पूरक छ।
जबकि पाठ को विकास जारी छ केहि व्यक्तित्वहरु - वास्तविक र काल्पनिक - प्राचीन समय को प्रतिनिधि शामिल छन्। यी समावेश: होमर, Ulysses, ट्रॉय को हेलेन र महान अलेक्जेन्डर। यात्रा को दौरान, Reverte पनि महत्वपूर्ण स्थानहरु लाई जोड दिन्छ, जस्तै टर्की कोस्ट, Peloponnese, रोड्स, Ithaca, Pergamum, Corinth, एथेन्स, Kastellorizon टापु, र अलेक्जेंड्रिया।
Ulysses को हृदय (सर्वश्रेष्ठ ...
उजाडको नदी। अमेजन को माध्यम बाट एक यात्रा (2004)
यस अवसर मा, यात्री ऊर्जा, महापुरुष र रोमांच को पूर्ण ऊर्जा को एक धार मा डुबेको छ: अमेजन। जब यो अमेजन पानी मा प्रवेश गर्दछ, reverte स्वदेशी कथाहरु को टुक्राहरु लाई बताउँछ। यात्रा जून २००२ मा दक्षिणी पेरु को अरेक्विपा शहर मा शुरू हुन्छ। नेभाडो डेल मिस्मी: परम लक्ष्य जहाँ एक यस्तो राजसी सहायक जन्मिएको छ प्राप्त गर्न को लागी हो।
उनको पथ संगै, केहि शहरहरु र शहरहरु लाई जान्न को लागी, Reverte पनी पौराणिक धारा को किनारहरु का बासिन्दाहरु संग कुराकानी गर्दछ। मार्ग वारन्जर यात्री डुats्गा, क्यानो र एक अवसर मा एक जोडी मा एक विमान को बोर्डिंग वारंट। मलेरिया संग बिरामी पर्नुको बावजूद, लेखक निको हुन र ब्राजील अटलांटिक मा आफ्नो यात्रा पूरा गर्न को लागी प्रबन्ध गर्दछ।
को नदी ...
नायकहरुको समय (2013)
यो जनरल जुआन Modesto को जीवन को बारे मा एक उपन्यास हो, को रूपमा सेवा गरे स्पेनी गृहयुद्ध मा कम्युनिस्ट सेना को नेता। कथा सशस्त्र संघर्ष को अन्तिम दिनहरु को दौरान मार्च १ 1939 ३ in मा शुरू हुन्छ। रिपब्लिकनहरु सत्ता छोड्न को लागी तयारी गरीरहेका छन् र फ्रान्कोवादीहरु नवीनतम विजयहरु को माध्यम बाट अग्रिम। त्यस क्षणमा, मोडेस्टो - अन्य सैन्य कर्मचारीहरु संग - सरकार बाट बाहिर निस्कने संगठित।
कथानक जनरल को व्यक्तिगत जीवन को पहलुहरु को वर्णन गर्दछ, उनको बचपन को यादहरु र उनको प्रेम जीवन को सानो टुक्राहरु जस्तै। यस बीचमा उनले लडेका लडाईहरु लाई सुनाईन्छ र कसरी सेनाहरु आफ्नो डर लाई पराजित गरे। वफादारी र साथी, सबैभन्दा कठिन क्षणहरु लाई पराजित गर्न वीरता संग सिपाहीहरु लाई भरियो।
नायकहरुको समय ...
जेभियर मार्टिनेज रिभर्ट उनको जन्म शुक्रवार, जुलाई १४, १ 14 ४४ मा म्याड्रिड मा भएको थियो। उहाँका आमा बुबा थिए: जोसेफिना Reverte फेरो र पत्रकार Jesús मार्टिनेज Tessier। एक सानै उमेर देखि उनी आफ्नो बुबाको पेशा को लागी आकर्षित भएको थियो, केहि कि लेखन को लागी उनको जुनून मा देख्न सकिन्छ। व्यर्थमा छैन दर्शन र पत्रकारिता मा विश्वविद्यालय को अध्ययन को लागी निर्णय गरे।
स्नातक पछि, उनले विभिन्न स्पेनिश मिडिया मा एक पत्रकार को रूप मा तीन दशक भन्दा बढी को लागी काम गरे। उनको कार्य अनुभव मा, उनको years वर्ष (१ 8 -1971१-१1978)) लन्डन, पेरिस र लिस्बन जस्ता शहरहरुमा एक प्रेस संवाददाता को रूप मा बाहिर खडा छ। आफ्नो क्यारियर को दौरान उनले आफ्नो पेशा संग सम्बन्धित अन्य प्रकार्यहरु मा पनि काम गरे, जस्तै: रिपोर्टर, राजनीतिक क्रॉनिकल, सम्पादकीय लेखक, र सम्पादक-इन-चीफ।
एक लेखक को रूप मा उनको पहिलो कदम रेडियो र टेलिभिजन कार्यक्रमहरु को लागी स्क्रिप्ट को माध्यम बाट थिए। प्रारम्भिक's० को दशक मा उहाँले आफ्नो जुनून को दुई मा ध्यान केन्द्रित गर्नुभयो: साहित्य र यात्रा।। १ 1973 XNUMX३ मा उनी औपचारिक रुपमा साहित्यिक संगै मैदानमा प्रवेश गरे Ulysses को साहसिक, काम जहाँ उहाँले एक globetrotter को रूप मा आफ्नो अनुभवहरु को केहि कब्जा।
कथा र कविता:'० 'मा उनले अन्य विधाहरुमा उद्यम गरे। यो उपन्यास को प्रकाशन संग शुरू भयो: अर्को देखि अन्तिम दिन (1981) र असामयिक मृत्यु (१ 1982 XNUMX२), र पछि कविताहरुको संग्रह महानगर (१ 1982 २)। उनले यात्रा किताबहरु संग जारी राखे र १ 1986 in मा उनले आफ्नो पहिलो गाथा प्रस्तुत गरे: मध्य अमेरिका त्रयी। यो तीन उपन्यासहरु बाट बनेको छ जसमा उनी समय को दौरान क्षेत्र को कठिन बर्ष को वर्णन गर्दछ।
Reverte एक व्यापक र निर्दोष साहित्यिक पोर्टफोलियो बनायो, संसार भर मा उनको यात्रा बाट 24 पाठ, 13 उपन्यास,4कविता र एक छोटो कथा को कुल संग। उनको सबैभन्दा उल्लेखनीय कामहरु मध्ये: अफ्रीका को सपना (१ 1996,, अफ्रिका त्रयी), Ulysses मुटु (1999), Stowaway ट्रेस (2005), उज्यालोको नदी। अलास्का र क्यानाडा को माध्यम बाट एक यात्रा (२००)) र उनको मरणोपरान्त काम: पानी पिउने मान्छे (2021)।
उनको लेखन क्यारियर को समयमा तीन पटक सम्मानित गरियो। पहिलो, मा 1992 म्याड्रिड पुस्तक मेला उपन्यास पुरस्कार को लागी युद्धको मान्छे। त्यसो भए 2001 को लागी उपन्यास Ciudad de Torrevieja प्राप्त भयो रात रोकियो (२०००)। उनको अन्तिम पहिचान आयो 2010, फर्नान्डो लारा डे Novela को लागी शून्य छिमेक।
जेभियर रिभर्ट उनी आफ्नो गृहनगरमा मरे, अक्टोबर ३१, २०२० मा। यो, कलेजोको क्यान्सर बाट पीडित को उत्पादन।
Javier Reverte द्वारा काम गर्दछ
Ulysses को साहसिक (1973)
मध्य अमेरिका त्रयी:
वर्षा मा देवताहरु। निकारागुआ (1986)
कोपाल को सुगन्ध। ग्वाटेमाला (1989)
युद्धको मान्छे। होन्डुरस (1992)
नर्कमा स्वागत छ। साराजेभो दिनहरु (1994)
अफ्रीका मा Vagabond (1998)
अफ्रिका को हराएको सडकहरु (2002)
Ulysses को मुटु। ग्रीस, टर्की र इजिप्ट (1999)
एक तर्फि टिकट (2000)
भावुक आँखा (2003)
यात्रा को साहसिक (2006)
Mbama को गीत (2007)
उज्यालोको नदी। अलास्का र क्यानाडा को माध्यम बाट एक यात्रा (2009)
जंगली समुद्रहरुमा। आर्कटिक को यात्रा (2011)
पहाडहरु जो जलाउँछन्, आगोको ताल (2012)
संसारको परिदृश्य (2013)
आयरल्याण्ड गाउनुहोस् (2014)
एक रोमन शरद .तु (2014)
एक चीनी गर्मी (2015)
न्यूयोर्क, न्यूयोर्क (2016)
इटालियन सुइट (2020)
अर्को देखि अन्तिम दिन (1981)
असामयिक मृत्यु (1982)
सदाबहार स्ट्रबेरी क्षेत्रहरु (1986)
रसातलकी महिला (1988)
संसारमा सबै सपनाहरु (1999)
रात रोकियो (2000)
Ifni को डाक्टर (2005)
तिम्रो राज्य आओस् (2008)
प्रभु पाको (1985)
छिमेकी शून्य (२०१०)
नायकहरुको समय (२०१३)
धुवाँ मा झण्डा (2017)
मैन ओवरबोर्ड (२०२१)
घाइते ज्वालामुखी (1985)
Stowaway ट्रेस (2005)
अफ्रिकी कविताहरु (2011)
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » किताबहरु » Javier Reverte: किताबहरु
फ्रान्सिस्को डे क्युवेडो। उनको मृत्युको वार्षिकोत्सव। सोनेट्स
मार्टा ग्रासिया पोन्स। Dragonfly's Journey को लेखक संग साक्षात्कार